Boqorka Sucuudiga oo shir kula qaatay Jeddah Madaxweynaha Sudan – SBC
Boqorka Sucuudiga oo shir kula qaatay Jeddah Madaxweynaha Sudan
Jeddah:-wakaaladda wararka sucuudiga ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Sudan Cumar Xasan Al-bashiir oo hadda socdaal ku maraya boqortooyada Sucuudiga uu kula kulmay qasriga boqortooyada magaalada Jeddaha boqorka sucuudiga Boqor C/della Bin C/casiis.
Boqor c/della ayaa ugu horeyn uga mahad celiyey madaxweyne Albashiir saxiixitaanka heshiiskii nabadda Daarfuur ee kadhacay magaalada Dowxa ee dalka Qatar khamiistii la soo dhaafay.
Labada mas’uul ayaa sidoo kale Kulankooda uga hadlay iskaashiga labada dal iyo kacdoonada ka socda qaar kamid ah dalalka carabta iyo xaaladda gobolka guud ahaan.
Dhanka sucuudiga ayaa waxaa sidoo kale uga qeyb galay kulankaan kuxigeenka madaxa golaha wasiirada ahna wasiirka arrimaha gudaha sucuudiga Al-amiir Naayif Bin C/casiis iyo Khaalid Al-faysal amiirka gobolka Makka Al-mukarama iyo wasiirka arrimaha dibadda Al-amiir Sucuud Al-faysal iyo madaxa sirdoonka guud Al-amiir Maqran Bin C/casiis iyo Lataliyaha adeegaha labada Xaramayn Al-amiir C/casiis Bin Bin C/della bin C/casiis iyo safiirka sucuudiga ee dalka Sudan Faysal Bin Xaamud.
Sidoo kale dhanka Sudan waxaa kulanka goob joog ka ahaa wasiirka madaxtooyada Jeneral Bakri Xasan Saalax iyo wasiirka arrimaha dibadda Cali Axmed iyo agaasimaha xafiiska madaxweynaha Dhaaha Cismaan Al-xuseyn iyo safiirka Sudan ee dalka Sucuudiga C/xaafid Ibraahim Maxed.